LOHATENY FIDERANA | safidy
Ny fizaran'ny vondron-tsofina.news (antsoina koa hoe safidy) dia mihevitra ny tenany ho tambajotra sosialy misy dikany. Mazava ho azy fa mila fitsipiky ny lalao ihany koa izay miaro anao sy izahay amin'ny fandoroana. Ny fampiasana tsy fampiasa amin'ny fampiasa amin'ny fampahalalana manokana dia tsy takatry ny saintsika.
Ho an'ireo olana rehetra dia alefaso mailaka amin'ny redaktion [AT] dieoption.at
Ny tena fepetra ilaina amin'ny fampiasana & fitsipika
Ny fitsipika ankapobeny amin'ny tambajotra sosialy sy ny forum dia mampihatra: tsy manavakavaka, mankahala fitenenana, mankahala ny fandefasana hafatra, fanaratsiana sns ...
Azafady mifantoha amin'ny atiny mahasoa sy mandrafitra.
Ny sary rehetra, ny lahatsoratra, ny feo na ny horonan-tsary dia tsy maintsy avy amin'ny mpampiasa azy tsirairay avy, mety tsy hanelingelina ny zon'ny mpamorona.
Ireo lahatsoratra navoaka dia nohidiana ho an'ny mpanamboatra, izay mety handany fotoana kely indraindray. Mangataka ny fahatakaranao.
Ny dokam-barotra Spam sy mivantana dia tsy maintsy esorina, tadiavina ihany koa ireo soso-kevitra ao anatin'ireo lisitra tsirairay momba izany.
Aseho, orinasam-panjakana sy fikambanana tsy miankina manondro orinasa / fikambanana tsirairay ao amin'ny sehatra tsirairay ao amin'ny mombamomba / fampiharana.
Ireo mpikambana izay mandefa fotsiny noho ny antony PR (matihanina) dia tsy esorina amin'ny rafitra ekena (famandrihana ary isaina ho an'ny fanavotana).
Fandraisana anjara sy ny zavatra rehetra mifandray amin'izany tsy misy fiantohana. Ny dingana ara-dalàna dia esorina.
Fantatrao fa ny fandraisana anjara nozarainao dia mivoaka sy manome anay tsy zon'ny fampiasana manokana, anisan'izany ny famoahana azy.
Ny safidy dia tokony ho azo antoka ara-dalàna. Ireto misy fepetra sy fepetra ankapobeny momba ny "Networks Networks" (jereo eto ambany) izay ekenao rehefa mampiasa azy ireo ianao.
Mahazo isa ianao amin'ny fandraisana anjara mavitrika amin'ny vondron'olona Option. Ireo teboka ireo dia azo navotana, miaraka amin'ny fandraisana anjara avo lenta na dia fandoa vola aza. Ny dingana ara-dalàna dia esorina. Voarara ny fanararaotana rehetra ary hosaziana. Noho ny antony ara-bola dia mety hiova ny rafitra fanamarinana.
eto no hitanao ny tolotra ankehitriny
Misy teboka misy (raha ny mpikambana mpikambana ihany no voaroaka):
Tombontsoa fandraisana - isa 5
Fitsidihana isan'andro - teboka 1
Mamorona lahatsoratra vaovao isan-karazany (5 pts) na 2 pts ho an'ireo lahatsoratra ao anaty lisitra efa misy
Fanehoan-kevitra - teboka 1 (fanehoan-kevitra / andro 10 tsara), ireo mpanoratra ny lahatsoratra no mandray teboka 0,5, tsikera spam -5 teboka
ny Toy (Vote) ho an'ny lahatsoratra iray dia mitondra teboka 0,5
amin'ny famakiana lahatsoratra dia mahazo teboka ny mpanoratra (avy amin'ny mpikambana ato anaty lisitry ny mpikambana ihany!)
ny sasany mbola ho avy na tsy haseho
Ireo laharana dia manondro ny asan'ny mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina. Mbola tsy voafaritra ihany izany amin'ny fotoana anoratana.
Ny fanazavana fanampiny momba ny zon'ny olona sy ny adidy
Mizara ny atiny sy ny mombamomba anao
Anjaranao daholo ny votoatiny sy ny mombamomba anao apetraka. Mihatra koa:
Ho an'ny votoaty voaro amin'ny zon'ny fananana ara-tsaina, toy ny sary sy ny horonan-tsary (IP afa-po) sy ny toy izany, omenay anao ny fahazoan-dàlana manaraka ireto: Manome alalana anao izahay, tsy azo ekena, azo afindrana, tsy azo ekena, tsy misy royalty, manerantany mba hampiasa izay atiny rehetra. izay alefanao na mifandraika amin'ny poste safidy. Ity fahazoan-dàlana ity dia mifarana rehefa nofafanao ny votoatinao na ny kaontinao; raha tsy efa zaraina amin'ny hafa ny votoatinao ary tsy namafa ny atiny izy ireo.
Rehefa mamafa ny atiny ianao dia voafafa amin'ny fomba mitovy amin'ny fanesorana ny Recycle Bin amin'ny solosaina. Na izany aza, tokony ho fantatrao fa ny atiny lavitra dia mety hitohy amin'ny backup backup ho an'ny fotoana mahamety azy.
Raha mampiasa fampiharana (na rindrambaiko) ianao, dia afaka mangataka ny fahazoan-dàlana anao hiditra amin'ny votoatinao sy ny mombamomba anao koa ity fampiharana ity, ary koa ny votoatiny sy ny fampahalalana izay nozarain'ny hafa taminao. Izahay dia mila fampiharana hanaja ny fiainanao. Ny fifanarahana nataonao tamin'ity fampiharana ity dia mibaiko ny fomba ahafahanao mampiasa, mitahiry ary mamindra ny atiny sy ny fampahalalana toy izany.
Ny famoahana votoaty na fampahalalana dia midika fa avelanao misy olona (ao anatin'izany ny olon-kafa ivelan'ny safidy) hidirana sy hampiasa ary hampifandray izany vaovao izany (izany hoe ny anaranao sy ny mombamomba anao).
Ny ezaka ataonay dia ataontsika antoka fa mijanona ho azo antoka ny safidy.news nefa tsy afaka manome antoka tanteraka izany. Mila ny fanampianao ianao mba hitazomana ny fiarovana amin'ny safidy. Anisan'izany ireto adidy manaraka ireto:
Tsy mandefa fifandraisana ara-barotra tsy nahazo alalana ianao (toy ny spam na mailaka mivantana) amin'ny option.news.
Raha tsy ekenay aloha, dia tsy hanangona ny atiny na ny mombamomba ny mpampiasa ianao amin'ny alàlan'ny fomba automatique (toy ny bots, robots, spider na scraper), ary tsy mahazo miditra amin'ny safidy.news miaraka amin'izy ireo ianao.
Tsy miditra amin'ny marketing amin'ny haavo isan-karazany tsy ara-dalàna ianao, toy ny drafitra Ponzi, amin'ny option.news.
Tsy mampiditra virus ianao, rindrambaiko na code hafa maharatsy azy.
Tsy mangataka fanazavana momba ny fidirana ianao na miditra amin'ny kaontin'ny olona hafa.
Tsy azonao atao ny masiaka, mampatahotra na hanelingelina ireo mpampiasa rehetra.
Tsy mandefa atiny izay mankahala fitenenana, mandrahona na mamoafady ianao, mandrisika ny herisetra, na mampiseho herisetra na sary manafintohina na mamaivay.
Tsy hamolavola na hampandehanana ny rindranasan'ny ankolafy tsy misy fepetra voafetran'ny taona ianao raha toa ka misy votoaty alikaola, mampiaraka, na votoatin'ny olon-dehibe (anisan'izany ny dokambarotra).
Tsy hampiasa option.news ianao hanatanteraka hetsika tsy ara-dalàna, mamitaka, manambaka na manavakavaka.
Tsy handray hetsika ianao izay afaka manakana, manilika tafahoatra, na manelingelina ny fampandehanana na ny fisafidianana mety, toy ny fanafihana Fandavoana an'i Denial-of-Service, na fanelingelenana amin'ny, serivisy atolotra na toetoetran'ny safidy hafa.
Tsy tokony hampandriana na mampiroborobo ny fanitsakitsahana an'io politika na politika ataontsika io ianao.
Fisoratana anarana, fisoratana anarana ary fiarovana ny kaonty
Ireo mpampiasa safidy dia manome ny tena anarany sy ny tena mombamomba azy. Raha tsy izany dia afaka mandà ny fisoratana anarana isika. Mba hitandremana azy dia mila ny fanampianao izahay. Ireto misy sasany amin'ireo fanoloran-tena ataonao aminao momba ny fisoratana anarana sy ny fitazonana ny fiarovana ny kaontinao:
Tsy manome fampahalalana diso momba ny Option ianao ary tsy mamorona kaonty ho an'ny hafa ankoatra ny tenanao tsy misy fahazoan-dàlana.
Kaonty manokana ianao no mamorona.
Raha ataonay ny kaontinao, dia tsy hamorona hafa ianao raha tsy nahazoana alalana.
Tsy mampiasa safidy ianao raha efa 16 taona.
Hamaronao tsara fa ny fampahalalana momba ny fifandraisana anao dia marina sy tsy hain'ny fanavaozana hatrany.
Tsy hatolotra ny tenimiafinao ianao, avelao ny olon-kafa hiditra ao amin'ny kaontinao ary tsy handray hetsika hafa ianao izay mety hanimba ny kaontin'ny kaontinao.
Tsy hamindra ny kaontinao ianao (ao anatin'izany ny pejy na ny fampiharana izay tantaninao) amin'ny olona tsy misy ny fahazoan-dàlana voasoratra ho anay.
Raha misafidy anarana anarana na ID mitovy amin'ny alàlan'ny kaontinao na takelakao ianao dia manana ny zo hanala na manafoana izany raha mino izahay fa mety (ohatra, raha toa ny tompona marika mitaraina momba a) Alefaso ny anarana izay tsy misy ifandraisany akaiky amin'ny tena anarany ny mpampiasa).
Fiarovana ny zon'ny hafa
Manaja ny zon'ny hafa izahay ary manantena fa hanao izany ianao.
Tsy mandefa votoatiny momba ny safidy ianao ary tsy manao hetsika manohitra ny zon'ny olon-kafa na tsy mifanara-dalàna.
Azontsika atao ny manala ny votoatiny sy ny mombamomba rehetra apetrakao amin'ny Option raha mino izahay fa manitsakitsaka io pôlitika io na ny pôtrakay.
Raha esorinay ny votoatinao satria manitsakitsaka ny zon'ny olon-kafa izany ary mino ianao fa nanala azy io tamin'ny alàlan'ny fahadisoana, dia mety mangataka izany ianao.
Raha manitsakitsaka imbetsaka ny zon'ny fananan'ny hafa ianao dia mety mampiato ny kaontinao.
Mety tsy azonao ampiasaina ny mari-pahaizana momba ny famantaranay na ny mari-pamantarana na ny endriny hafa mitovy aminy sy mora azo ovaina; raha tsy avela am-pitiavana ny politikam-barotra na amin'ny alàlanay alalana an-tsoratra.
Tsy manangona vaovao amin'ireo mpampiasa ianao.
Tsy mandefa antontan-taratasy momba ny mombamomba anao na fampahalalana ara-bola saro-pady avy amin'ny olon-kafa rehetra ianao.
Azonao atao ny tsy mamoaka ireo mpampiasa raha tsy eken'izy ireo na mandefa mpampiasa tsy misy fanasana mailaka.
Mandoa vola (miaraka amin'ny isa)
Raha manao fandoavam-bola ianao, manaiky ny voalazan'ny fandoavan-dalàna raha tsy voalaza. Ny dingana ara-dalàna dia esorina.
Vatsy manokana ho an'ny mpanao dokambarotra
Hanambara aminao izahay alohan'ny handraisantsika fanovana amin'ireo fepetra fampiasana. Amin'izay ianao dia hanana fotoana handinihana sy hanomezana hevitra momba ireo teny nohavaozina alohan'ny hanohizanao ny fampiasana ny serivisinay.
Raha manova ny politika na ny fepetra hafa ampiasaina ao amin'ity fanambarana ity isika dia mety hampahafantarina antsika amin'ny safidy.
Raha manitsakitsaka ny atiny na ny toe-tsain'ity fanambarana ity ianao na mampidi-doza anay na manondro anay amin'ny risika ara-dalàna dia azontsika atao ny manelingelina ny fanomezana ny tolotra ataonay aminao. Izahay dia hilaza aminao amin'ny alàlan'ny mailaka. Azonao atao ihany koa ny mamily ny kaontinao amin'ny fotoana rehetra na ialako ny fampiharana anao.
Raha misy olona manao fitakiana hanoherana anay noho ny zavatra nataonao, ny votoatinao na ny mombamomba anao, dia hanome toky anao izahay noho ny fahavoazana, ny fatiantoka ary ny fandaniam-bola na inona na inona (anisan'izany ny saram-panao mpisolo toerana sy ny sarany ara-dalàna). Na dia manome fitsipika ho an'ny fitondrantenan'ny mpampiasa aza izahay dia tsy mifehy na manery ny fihetsiky ny mpampiasa ho safidy isika ary tsy tompon'andraikitra amin'ny votoatiny na ny fampahalalana izay ampitain'ny mpampiasa azy na ny safidiny. Izahay dia tsy tompon'andraikitra amin'ny votoaty manafintohina, tsy mety, tsy manara-dalàna, tsy fanarahan-dalàna na amin-javatra tsy manafintohina izay mety hitranga aminao. Izahay dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fitondran-tenan'ny mpampiasa Option, na an-tserasera na ivelany.
TONGA IZAY HANOTANA VE TSY HANOTANA, MANGALATRA ARY FAHAFANTANA, ARY IZAO MBOLA AZO ATAO MBOLA ANAO AMIN NY FOTOTRAO ATAO. MAMPITANTSIKA NY FILANANA INDRINDRA AN-TENY FEHOVAHANA TSY MIASA ANY NA INDRINDRA AZONAO NA ATAO ATAO; IANAO IZANY DIA MBA HANAMPY INDRINDRA INDRINDRA, FIVORIANA MBOLA TENY FIVORIANA ARY FAHADIANA AZONY. TSY MAZAVA IANAO FA NY FOTOTRA AZY MBOLA TSY AZO ATAO FOTOTRA, FOTOTRA ARY FAHAFANTANA, ARY ATAO VOLA TSY MISY TOKONY MBOLA TSY HITA INDRINDRA, MBOLA MAIKA NA FAHAFANTANA. TSY MISY FOTOTRA NY RESAKA INDRINDRA MBOLA INDRINDRA, FIVORIANA, FIDERANA NA DATA. AZONAO VE IANAO IZAO ARY NY FAMPISEHOANA AN'AO ARY IZAY REHETRA REHETRA ARY IZAY REHETRA AZONY ARY TSY MAHAY MANDROSO IZAY HITANAO ARY IZANY DIA MBOLA MOMBA NY FAMPISEHOANA AZO ATAO FAHALALANA IZANY NA INDRINDRA IZAY ARY VONONA NY FOMBA FARANY. TSY MAINTSY MANDROSO NY FAHAMAROANA ANAO MOMBA NY FOMBA FAMPISEHOANA NA FIKAMBANANA, FIVORIANA, FIVAVAHANA, NA HAFA MOMBA NY FAMPISEHOANA ARY VONONA NY FAHAMAROANA INDRINDRA INDRINDRA INDRINDRA INDRINDRA INDRINDRA INDRINDRA INDRINDRA INDRINDRA INDRINDRA. NY FAHADIOVANA ARY ATSOROKA MITADIAVIN'NY TENY ATAO FARANY na ATAONAO FOTOTRA AZY ATAO NY FANAVOTANA FAMPISEHOANA AN'ANDRIAMANITRA TAMIN 'NY EURO. LALANA FAMPISORANA AZONY AZONAO AZY ATAO LOHITSY NA FAMPISEHOANA NY LIABILITIANA MBOLA MOMBA NY FOMBA FAMPISEHOANA NA FIVAVAHANA INDRINDRA, INDRINDRA NY FAHADIANA NA FAHAFATESANA AZY DIA TSY HANOTAINA NY TANY. NY FAMPISEHOANA DIA AZONAO MBOLA TSY MAZAVA AZY. INDRINDRA TAMINY, NY FIAINAN’NY FOTOTRA AZON’NY FIAINANA AZY MBOLA TENA ANAO FARANY MANGATAKA FARANY.
Miezaka izahay hamorona vondron'olona manana fenitra miavaka. Na izany aza, miezaka ny hanaja lalàna ao an-toerana ihany koa isika.
Manaiky ianao fa ny angon-drakitrao manokana dia hafindra sy hokarakaraina any Aotrisy (ary ny toerana misy ireo mpizara mpizara mpizara na vahaolana amin'ny cache any Eropa sy any ivelany).
Mety tsy handray anjara amin'ny hetsika ara-barotra arak'asa ianao (toy ny dokam-barotra na ny fandoavam-bola) na miasa rindrambaiko na tranonkala raha mipetraka any amin'ny firenena iray nolavin'i Aotrisy na i Eropa ianao.
"Option" na "Option Services" na "option.news" ary "option.news Services" dia ahitana ny endri-javatra sy ny serivisy rehetra izay omenay, ao anatin'izany amin'ny alàlan'ny (a) tranokalanay ao amin'ny www.dieoption.at sy ny hafa rehetra. ny tranokala marika na misy marika (miaraka amin'ny subdomain, dikan-teny iraisam-pirenena sy finday, ary koa ny Widget sy fampiharana); (b) manome ny lampihazo sy (c) plug-in sosialy na fanomezana hafa mitovitovy ary (d) haino aman-jery efa antitra na ho avy amin'ny haino aman-jery efa novokarina na ho avy mialoha, na fitaovana, serivisy, rindrambaiko (toy ny fitaovana), fitaovana na tambajotra. Ny safidy dia manana zo, araka ny fahaizany irery, mba hamaritana fa ny sasany amin'ireo marika, vokatra na serivisintsika dia fehezin'ny fehezan-dalàna amin'ny fampiasana manokana fa tsy amin'ny filazalazana ny zon'olombelona sy ny andraikiny.
Ny teny hoe "sehatra" dia manondro andiana API sy serivisy (toy ny votoatiny na atiny) izay mamela ny hafa, toy ny mpampivoatra ny app ary ny mpandraharaha tranonkala, haka ny angona avy amin'ny Option na manome antsika data.
Amin'ny alàlan'ny "information" dia midika zava-misy sy fampahalalana hafa momba anao izahay, anisan'izany ny hetsika mifandraika amin'ny mpampiasa mifandraika amin'ny safidy sy ny tsy mpampiasa.
Ny "votoaty" na ny "votoaty" dia misy ny zavatra alefanao, omenao na zarainao amin'ny alàlan'ny safidin'ny serivisy, na alefanao, na alefaso na zaraina amin'ireo mpampiasa hafa.
"Data" na "User Data" na "Data Data" na "User Data" dia midika ny angon-drakitra rehetra, ao anatin'izany ny votoatiny na ny fampahalalana avy amin'ireo mpampiasa, fa na ny fisianao fahatelo dia afaka mahazo misafidy ianao na manome safidy amin'ny alàlan'ny Platform. ,
Amin'ny alàlan'ny "Post" dia midika hoe famoahana votoaty ho safidy isika na raha tsy manolotra atiny amin'ny alàlan'ny safidy.
Ny "Fampiasana" dia fanondroana, fampiasa, fanaovana kopia, fampisehoana ampahibemaso na fampisehoana, fizarana, fanovana, fandikana ary famoronana dikan-derivaly.
Ny "App" dia manondro rindrambaiko na tranonkala mampiasa na miditra amin'ny Platform sy rafitra hafa izay nahazo na nahazo data data. Raha tsy miditra amin'ny lampihazo intsony ianao fa tsy nesorinao daholo ny angonay, dia hitohy ny voambolana hoe "fampiharana" mandra-mamafao ny data.
Io fanambarana io dia mandrafitra ny fifanarahana manontolo eo amin'ireo antoko mifandraika amin'ny Safidy ary manoloana ny fifanarahana rehetra teo aloha.
Raha misy ampahany amin'ity fanambarana ity dia raisina ho tsy mitombina, ny fepetra sisa tavela dia mitoetra amin'ny hery sy ny vokatra rehetra.
Ny tsy fahombiazan'ny fisafidianana hampihatra izay fepetra rehetra an'ity fanambarana ity dia tsy fanilihana zony.
Na ny fanovana na ny fandavana izany fanambarana izany dia tsy maintsy an-tsoratra sy ho sonianay.
Tsy hamindra ny zonao na ny adidinao ianao eo ambanin'ity fanambarana ity amin'ny hafa raha tsy ekenay.
Ny zo sy adidy rehetra ananantsika eto amin'ity fanambarana ity dia apetrakay malalaka amin'ny alàlan'ny fampifangaroana, fividianana, fivarotana fananana na amin'ny asan'ny lalàna na hafa.
Tsy misy ampahany amin'ity fanambarana ity izay manakana antsika tsy hanaraka ny lalàna.
Io fanambarana io dia tsy manome tombontsoa ho an'ny antoko fahatelo.
Izahay dia manaja ny zo rehetra tsy omena anao mazava.
Hanaraka ny lalàna rehetra azo ampiharina ianao rehefa mampiasa na miditra Option.
Mikaroka ireo olana eto an-toerana i Ruby ary manamboatra azy io
in Malaza any Alemana, Kultur, Torohevitra video